Kooxaha Real Madrid iyo Manchester City oo isku heysta xiddig muhiim ka ah Juventus – Gool FM
Kooxaha Real Madrid iyo Manchester City oo isku heysta xiddig muhiim ka ah Juventus
(Yurub) 19 Maajo 2019. Wargeyska reer Talyaani ee “Tuttosport” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday suurtagalnimada ay kooxda Juventus ku iibin karto xiddiga reer Bosnia ee Miralem Pjanić xagaaga soo aadan.
Sida laga soo xigtay “Tuttosport” waxaa jiri doona dagaal weyn ee u dhexeyn doona kooxaha Real Madrid iyo Manchester City, ee ku aadan lasoo saxiixashada 29 jirka Juventus ee Miralem Pjanić.
Kooxda Real Madrid uu hogaaminayo macalinka reer France ee Zinedine Zidane ayaa waxay rajeenayaan inay xoojiyaan xulashadooda dhanka khadka dhexe, gaar ahaan maadaama Modric da’adiisa ay sii weynaaneyso, isla markaana Toni Kroos uu xiiseenayo ka tagista garoonka Santiago Bernabeu.
Halka sidoo kale tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola, uu rajeenayo inuu xoojiyo khadkiisa dhexe, maadaama David Silva da’a ahaan uu sii korayo, halka uu shaki ku jiro in İlkay Gündoğan uu u saxiixi doono heshiis cusub kooxda reer England.
Sidoo kale wargeyska Talyaaniga ayaa sheegay in PSG ay sidoo kale dooneysay inay soo iibsato Miralem Pjanić, laakiin maamulka kooxda Juventus ayaan diyaar u ahayn inay iibiyaan laacibkoodan, balse waxay wada dhageysan doontaa dalabyada loo soo bandhigay, xitaa hadii ay la kulanto dalab gaarsiisan 80 milyan oo euros waxay diyaar u tahay inay iibiso xidiga reer Bosnia.